Daawo Muuqaal ahaan Biriq sigtay Diyaaradii uu saarnaa Madaxweeynaha cusub ee dalka Faransiiska& dib u dhac ku yimid Safarkiisa - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweeynaha cusub ee dalka Faransiiska Mr.Francois Hollande oo maalintii Talaadada eheed la wareegay xilka Madaxtinimada dalka Faransiiska ayaa waxaa qabsatay Nasiibdaro iyo isku dhex yaac ka dib markii uu 2 Saacadood ka soo daahay Safar uu ku tagi lahaa magaalada Berlin ee caasimada dalka Germany.
Madaxweeyne Francois Hollande waxaa Safarkiisa dib u dhigay Roobab xoogan oo ka da´ayay gudaha dalka Faransiiska wuxuuna raali gelin deg deg ah u diray Haweeneeyda Raisulwasaaraha ka ah dalka Germany ee lagu magacaabo Angela Mekel taas oo sugeeysay in ka badan 2 Saacadood.
Warbaahinta ugu caansan dalka Faransiiska waxay shaacisay in Diyaaradii uu raacay Madaxweeyne Francois Hollande ay dhex gashay Daruuro halis ah kuwaas oo laga dhex maqlayay Biriq iyo onkod lixaad leh. Sidoo kale warbaahinta waxay soo bandhigtay markii uu duulayay Madaxweeyne Francois Hollande in dhamaan dharkii uu watay ay ahaayeen kuwo uu Roobka qooyay.
Madaxweeyne Francois Hollande oo jagada Madaxtinimada Faransiiska kaga guuleeystay dhoor Isbuuc ka hor Madaxweeynihii hore ee dalkaas Mr.Nicolas Sarkozy waxaa Mr.Hollande la sheegay in isaga iyo Xisbigiisuba u roon yihiin dadka Ajaanibta ah ee dalka Faransiiska ku nool waana nin neceb waxa loo yaqaan Cunsuriyada iyo Midabtakoorka.
Shimbir la qabtey oo muran diblumaasi ka dhex dhaliyey Dowlaha Turkiga iyo Yahuuda (Talow Maxuu ahaa Shimbirkaasi)